FJKM Manazary Maritiora Ilafy Jobily faha 150 taona
Komity 150 taona
Asa Fanitarana Tsangam-bato
Jobily fankalazana ny faha 150 taonan'ny fiangonana
"Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavàna tsara hianareo"
Marka 9 50b
Compte Bancaire FJKM Manazary Ilafy
Miarahaba antsika mianakavy
Mbola tena ao anatin' ny ASA Fanitarana ny FJKM Manazary Ilafy amin'ny zao fotoana izao .
Ity ary misy Vaovao lehibe ho antsika , indrindra ireo Havana aman-ts
» Vaovao rehetra
Fiangonan ’ I Jesoa Kristy eto MADAGASIKARA
Sinodam-paritany ANTANANARIVO Atsinanana
Fitandremana Manazary Maritiora - Ilafy
Ho aminareo lalandava anie ny fiadanan’ny Tompo.
Misaora an’ I Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny Anarany Masina. Misaotra an' Andriamanitra tokoa isika fa noho ny fitahiany dia tratra ny Jobily faha 150 taona ( 1864 – 2014 ). Zava-dehibe tokoa izany no zara ho antsika rehetra teraky ny FJKM Manazary Maritiora Ilafy. Hankalaza io vanim-potoana lehibe io isika no hamela Tsangam-bato lehibe dia ny fanitarana ny trano Fiangonana. Ny teti-bidin’ ny io asa io dia 120 tapitrisa Ariary na 600 millions FMG.
Misokatra ny "site web" hahazoan-tsika mifanerasera. Ho hita ato avokoa ny andinindininy rehetra .
Hoy ny teny Fanevan’ ny Jobily hoe : "Aoka hisy sira ao anatinareo , ka mihavàna tsara hianareo" ( Marka 9 /50b ).
Koa mampahery anareo amin'ny Anaran'ny Tompo Jesoa mba ho voninahitr'Andriamanitra anie ny asantsika .
+ hijery ny sary rehetra
Miarahaba antsika mianakavy , Mbola maro ny dingana ho diavina , manantena sahady anefa ny tenako fa ho tratran-tsika ny tanjona . Hiezaka ny tenako ampita zay vaovao rehetra momba ny FJKM Manazary ,indrindra fa ny faha 150 taona , ary ampiseho ny dingana zay vita . Koa mampahery anareo amin'ny Anaran'ny Tompo Jesoa mba ho voninahitr'Andriamanitra anie ny asantsika.
- Andriantsara William RAJAONALISOA
samedi 5 octobre 2013 06:40
ANDRIANASOLO Fanantenana Mamhy
+261 34 03 605 40
VAOMIERA MANAZARY ILAFY
FITANDREMANA MANAZARY MARITIORA ILAFY SINODAM-PARITANY ANTANANARIVO ATSINANANA
Midira ho mpikambana raha te hamela hafatra.
Rafitry ny tranokala
Fanatontosana Netunivers.com © 2013 FJKM Manazary Maritiora Ilafy, Jobily faha 150 taona Fanolorana - Serasera - Rafitry ny tranokala - www.fjkm.mg